Sina GD-EMB-015 ： bisikileta elektrika, 36V250W, 27.5 santimetatra, ShimanoTY300, orinasa mpamokatra kapila ary mpamokatra | GUODA
GD-EMB-015 ： bisikileta elektrika, 36V250W, 27.5 santimetatra, ShimanoTY300, kapila kapila mekanika
Vaky kapila mekanika
6-fantsom-pandefasana solosaina mifangaro
Fanidiana mekanika sy fidorohana ny soroka aluminium
Miantso ny hafainganam-pandeha 7 haingana
Bisikileta an-tendrombohitra herinaratra GuoDa # GD-EMB-015
Previous: GD-EMB-014 ： bisikileta elektrika mahery vaika, 36V 250W, motera miorina aoriana, rafitra firaka
Manaraka: GD-EMB-016 ： bisikileta an-tendrombohitra herinaratra, 27.5 santimetatra, metatra LED, motera mitaingina antonony, bateria namboarina
Mividiana bisikileta tena tsara hanombohana ny bisikiletanao. Ny fikarohana siantifika dia mampiseho fa ny bisikileta dia mahasoa ho an'ny vatan'olombelona. Noho izany, ny fividianana bisikileta mety dia midika hoe misafidy fomba fiaina salama. Ho fanampin'izany, ny mitaingina bisikileta dia tsy vitan'ny hoe manampy anao handositra ny fitohanan'ny fifamoivoizana sy hiaina fiainana maitso karbaona ianao, fa hanatsara ny rafitra fitaterana eo an-toerana ary ho sariaka amin'ny tontolo iainana.
Ny GUODA Inc. dia mamokatra bisikileta maro karazana sy isan-karazany arak'izay safidinao. Ary izahay dia manolo-tena hanome ny mpanjifanay amin'ny serivisy be fiheverana indrindra.
Rehefa mitaingina bisikileta elektrika ianao dia tsy misy mitaingina lava loatra, tsy misy entana mavesatra loatra, ary tsy misy toerana tsy zakan'ny tongotrao. Atsofohy ny fitohanan'ny fifamoivoizana isan'andro, manaova fanatanjahan-tena bebe kokoa, ary mahatsapa fahafinaretana amin'ny fanitsakitsahana moramora ny planeta. Ary ny tsara indrindra rehetra-dia mipoaka fipoahana eny an-dalana.
27.5 santimetatra fivarotana mafana bisikileta
bisikileta elektrika namboarina
e-bisikileta misy frein disc
e-bisikileta miaraka amin'ny LED Mter